१३ सय ५५ दिनपछि संसद बिघटन, अन्तिम दिन कुन नेताले के भने ? – YesKathmandu.com
१३ सय ५५ दिनपछि संसद बिघटन, अन्तिम दिन कुन नेताले के भने ?
काठमाडौं । ब्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै दलका शिर्ष नेताहरुले सम्वोधन गरेपछि संसद बिघटन भएको छ । संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदको अन्तिम बैठकमा नेताहरुले घोचपेजदेखि आफ्नो बिगतलाई सम्झिएका थिए ।
मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलले संविधानको विरोध गरेका थिए भने अन्य दलका नेताहरु संविधान बनाएको भन्दै खुसीयाली साटेका थिए । २०७० सालमा भएको निर्वाचनपछि बनेको यो संसदले १३ सय ५५ काम गरेको छ । संसदको अन्तिम बैठक बस्नुभन्दा पहिले सवै सांसदहरुले संसद भवनमा सामुहिक तस्विर खिचाएका थिए ।
संसदमा नेताहरुले मिठोरुपमा एक अर्काेको आलोचना समेत गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यप्रति कडा आलोचना गरेका थिए ।
संविधानसभाबाट संविधान नबनेको भए म सकिने थिएँः प्रचण्ड
सविधानसभाबाट संविधान नबनेको भए सवैभन्दा पहिले आफु सिघिने ठुलो चिन्ता भएको बिगतलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झे । संविधानसभाको माग हामीले युद्धबाटै गरेका थियौ, पहिलो पटक माओवादी पहिलो दल हुँदा पनि बिघटन भयो, दोस्रो पटक पनि बिघटन भएको भए म सकिने निश्चित थियो, दाहालले भने ।
एमाले र राप्रपा नेपालबीच गोप्य सहमति, कमल थापा परराष्ट, कुन्ती शाही स्थानीयमा निश्चित
संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता दिने कांग्रेसको निष्कर्ष
पूर्व कर्नेल तथा माओवादी पूर्वसांसद आफ्नै घरमा कुटिए, प्रहरीले बालबाल ज्यान जोगायो